Andriamanitra ihany no afaka mitsara ahy? — Trip LEE - OFISIALY SITE
Tiako ny miresaka momba ny sitrapon'Andriamanitra ho an'ny fiainantsika, na dia rehefa misy olona tsy manaiky amiko momba izany. Resadresaka dia afaka mahazo ny tena henjana aza-tena haingana indrindra rehefa miresaka momba ny olana mampiady hevitra. Tena mahafinaritra na oviana na oviana ny hilaza ny olona iray fa ny hevitrao ry zareo diso. Noho izany dia miezaka ny mitandrina amin'ny teniko, ary manondro fotsiny ny izay lazain'Andriamanitra, fa tsy ny heviny manokana. Toy ny clockwork, anefa, amin'ny fotoana iray mandritra ny resaka, dia Ho hesoriko ny trompetra karatra: "Fa tsy ny Baiboly milaza koa tsy hitsara? Ianao conveniently dia nifalihavanja noho izany andininy, huh?"Tena tsy ho levona mandrakizay.
ao amin'ny Matio 7 hoy i Jesosy, "Aza mitsara, na ianareo koa dia hotsaraina. "Na dia ireo antsika izay mbola tsy namaky ny Baiboly, dia afaka mitanisa ity faritry ny toriteniny teny teny. Izany angamba no tsara indrindra fantatra andinin amin'izao androntsika izao. Ary mety koa ho ny tena diso fandray
Fahazoan-kevitra io andininy io dia midika hoe ny fomba no diso fandray isika dia tokony mba hifankatia. Noho izany, zava-dehibe ny mangataka ny fanontaniana: Inona no tian'i Jesosy holazaina rehefa milaza amintsika tsy hitsara?
Inona izy tsy midika
tamin'ny faran'ny herinandro, izaho sy ny vadiko nanatrika ny fanambadiana any am-piangonana atrikasa. Rehefa nandeha alalan'ny takona rehetra sy ny cranny ny fanambadiana, tsy maintsy hiresaka momba ny tsara, ny ratsy, ary ny ratsy tarehy. Nanana vintana maro mba hampaherezana ny hafa, fa nanana vintana koa mba hanondro fahadisoana. Nandritra ny fifanakalozan-kevitra, Nanampy ahy ny vadiko mba hahita toerana lavo aho fohy, izay aho hoe toy ny fitiavana tsy araka ny tokony ho. Nisy izy tsy nankatò ny didin'i Jesosy tsy mba hitsara ahy? Tsy mino aho izany.
Jesosy dia afaka tsy midika fa ny ratsy hanaovana izay fitondran-tena ny fitsarana. Vitsivitsy taty aoriana andininy, Hoy i Jesosy tamin'ny mpihaino azy mba hanao ny fitsarana momba ny hoe iza izy ireo hizara ny fahamarinana amin'ny. Ary eo amin'ny andininy faha 15 ny amin'io toko io ihany, Jesosy Mampianatra azy ireo mba hitsara ireo izay milaza ny tenany ho mpaminany, hahitana raha toa izy ireo tena miteny avy amin'Andriamanitra, na raha toa ry zareo amboadia amin'ny fitafian'ny ondry. Tsy lazaina intsony ny andalan-teny maro hafa ao amin'ny Soratra Masina izay mandidy antsika mba hanao fitondran-tena isan-karazany karazana didim-pitsarana. Jesoa dia tsy midika hoe diso ny fitsarana rehetra. Ary raha ianao marin-toetra amin'ny tenantsika, tsy midika izany hoe na.
Maro no manizingizina fa tsy tokony hitsara na iza na iza, nefa tsy tena mino fa. Tsy mino izy ireo fa tsy mety hiantso ny polisy teo amin'ny mpivarotra zava-mahadomelina mivarotra dope eo anoloan'ny an-tranony. Ary azo antoka fa tsy mihevitra fa mety ny vonoy ny tele rehefa manomboka tia vola mpitory mangataka ny vola. Avy eo misy ny esoeso. Rehefa miantso olona iray ho an'ny hitsara, raha ny marina ianao manao ny fitondran-tena didim-pitsarana momba izany olona. Ao amin'ny tsirairay avy ireo toe-javatra, ny fitsarana no natao momba ny zavatra nataon'ny hafa.
Na izany aza, na aiza na aiza ny fitsarana rehefa mamely akaiky an-trano, izany avy hatrany diso. Iza no tokony hanao ny fitsarana ny hafa? Andeha eritrereto ny zavatra Jesoa no holazaina rehefa milaza amintsika tsy ho mpitsara.
Inona no Dikan'ny hoe izy
Mampiasa ny teny hoe mpitsara tao be dia be ny fomba. Mety ho isika miresaka momba ny hitsara ny fampisehoana talenta, na hitsara ny fitsarana raharaha. Mety hoe be dia be ny zavatra hafa. Toy izany koa, ny teny grika hoe i Jesosy dia mampiasa ny "mitsara" dia tsy midika foana toy izany. Noho izany tsy maintsy hijery ny sisa io andalana io sy ny sisa amin'ny Baiboly, raha te hahatakatra izay tiany hambara.
Rehefa manohy ny famakiana ny andalan-teny, dia lasa mazava fa i Jesosy no manafika ny karazana fitsarana manokana. Ampiasainy ny mahatsikaiky endriky ny lehilahy iray izay iray, ka nahita sombin-kazo eo amin'ny olona iray ny sawdust mason'ny, fa tsy miraharaha ny zava-misy fa manana goavana vatan-kazo tao an-. Izany tahaka ny lehilahy mitanjaka mitsikera ny lavaka ao amin'ny pataloha jeans. Jesosy dia tsy nanameloka na karazana fitsarana; Izy no manameloka-tena ho marina, mpihatsaravelatsihy ny fitsarana.
ao amin'ny andininy faha 5 hoy izy, "Ry mpihatsaravelatsihy, aloha maka ny miditra antsika ny masonao. "Alohan'ny manandrana ny hitsara ny hafa, tsy maintsy mamantatra ny tenantsika. Mpihatsaravelatsihy mihazona ny olona ny fitsipika fa raha ny tenany tsy miraharaha. Ary raha tena marina ny olona manana fanomezam-pahasoavana manokana ho an'ny manondro avy ny kileman-toetra, ry zareo manadino ny manokana. Nilaza i Jesosy fa ny olana. Ary milaza amintsika Andriamanitra dia hitsara antsika ho setrin'izany.
Tena mahatsikaiky ny mafy hanameloka ny hafa sy hijoro azy toy ny hoe ny fiainana tonga lafatra. Andriamanitra ihany no mpitsara amin'ny madio tanana. Ny sisa isika dia maloto ny olona, manondro ny tsirairay ho amin'ny ranonorana.
Ianao tsy mahita izy hoy, "Raiso ny vatan-kazo avy, ary aza manahy momba ny olon-kafa ny masony. "Hoy izy raha ny marina, ", Esory aloha ny vatan-kazo amin'ny masonao, ary avy eo dia ho hitanao tsara ny hanesoranao ny sombin-kazo eo amin'ny mason'ny rahalahinao. "Izy no milaza amintsika mba handini-tena, ary avy eo mba hanampy ny rahalahy avy.
Tena manam-pitiavana ho ahy ny mahita zavatra mampidi-doza eo amin'ny fiainanao, fa tsy miraharaha azy io toy izany tsy misy. Nahoana no aoka olona tiako foana ny miaina amin'ny fomba manimba? Raha tia anao, Lazaiko aminareo aho ny marina na dia efa nampahoriny. Fa tsy maintsy miorina amin'ny ny fenitra, tsy ny manokana. Ary tsy maintsy manao izany avy amin'ny fihetsika feno fanetren-tena izay manaiky ihany no mila ny fahasoavana ataonao.
Aza manaiky Matthew 7:1. Fa aza manadino momba ny Galatianina 6:1: "Ry rahalahy, raha misy olona azon'ny ota tsy nahy, ianareo izay ara-panahy dia tokony hamerina azy moramora. "Mila ny tsirairay.
MrAveryBrown • Novambra 12, 2013 amin'ny 12:46 PM • navalin'i
mampahery. mandresy lahatra. voahevitra. Andao jereo ny fo, miezaka mianatra ity foto-kevitra, isan'andro ary hampihatra izany.
Steve • Novambra 13, 2013 amin'ny 4:31 PM • navalin'i
teny soa, Trip. Very azo ampiharina, manampy fangatahana ireo izay mifandraika amin'ny toe-draharaha ity karazana. Anie ny fahasoavana sy ny fiadanana…
Esteban Ramirez • Novambra 12, 2013 amin'ny 12:57 PM • navalin'i
Izany no tena famaritana marina izany andininy. Misaotra anao aho rahalahy efa sahirana ity. Misaotra foana ny rahalahiko hanao izay azonao manao!
Ny rahalahinao ao amin'i Kristy!
Charles • Novambra 12, 2013 amin'ny 1:07 PM • navalin'i
Araka ny pasitera vao nita ity ny herinandro lasa izay dia vaovao tao an-tsaiko. Pastor hoy Brian “mpitsara dia tsy mety raha mamaky teny ny teny grika izy ka namaky teny manodidina.” Dia nandroso hoe fandikan-teny tsara kokoa Mety ho “Tsy hanameloka toy ny Mpitsara” na hanao zavatra toy ny mpitsara (antitra testement fomba). Ny fanaovana ny fitsarana sady hiantra ny fehezanteny dia 2 zavatra samy hafa.
MimiRivera • Novambra 12, 2013 amin'ny 1:10 PM • navalin'i
Aint nothin fa ny marina :) Amen rahalahy.
Jared • Novambra 12, 2013 amin'ny 1:25 PM • navalin'i
Izany no tena ilaina eo amin'ny fiainako amin'izao fotoana izao. Vao haingana aho no nanana fifanakalozan-kevitra miaraka amin'ny renibeko izay tsy mpino, ary miezaka aho mba hampiseho taminy ny fitiavany. Aho, fa hanaiky ny fahotako ho azy ary mangataka ny famelan-keloka, ary izy no mamela heloka fa izy kosa ho tsikera mavaivay momba ny fomba ratsy aho amin'ny zavatra sasany. Fantatro diso aho noho ny faharesen-dahatra efa mahatsapa aho avy amin'Andriamanitra, fa manahirana ahy kely satria izy tsy mahita azy ny fahotana. Manorotoro ahy fotsiny izy teo. Mitsiky aho ary tia azy. Fantatro fa manana olana amin'ny fitiavana ny fianakaviako, fa manahirana ahy kely ao rehefa tsy manaiky azy ny fahotana sy ny tena haingana ny mahafantatra ahy. Izany no manampy ny sasany na. Misaotra
Ezra_of_Israel • Novambra 12, 2013 amin'ny 1:31 PM • navalin'i
Tena tsara ny fomba mamerina izany sy ny fandalinana ny soratra masina. hotahian'andriamanitra anie ianao. Inona no atao hoe fitia? Foana aho mandany ela tamin'izany fanontaniana tsotra ...... woah
PastorBenJohnson • Novambra 12, 2013 amin'ny 1:34 PM • navalin'i
Right tamin'ny! Mba hiaraka ity, Hoy i Paoly ao amin'ny 1 Corinthians 5:12: “Inona raharaham-barotra no ny Ahy ny hitsara ny any ivelany ny fiangonana? Moa tsy hitsara ireo ao anatiny.”
Izany dia ny asa toy ny mpino hanao ny rahalahy sy anabavy ao amin'i Kristy tompon'andraikitra. saingy, dia mila mandinika ny tenantsika ho manerana! Lehibe bilaogy Trip Lee!
harryyeboah • Novambra 12, 2013 amin'ny 1:47 PM • navalin'i
Wow! Niana-javatra betsaka. TAHIN'ANDRIAMANITRA..
EboniRenee • Novambra 12, 2013 amin'ny 1:49 PM • navalin'i
Beautifulluy & pisainana nataony. Tsy nila izany.
Tony • Novambra 12, 2013 amin'ny 2:00 PM • navalin'i
Thanks Trip, izao no ampahany manan-danja ny soratra masina mba hahatakatra tsara. Misaotra anao amin'ity lahatsoratra ity. Efa nataony tao teny izay aho no nisaintsaina. Aho mpitandrina ny tanora, ary izany no zavatra ive no te hiresaka miaraka amin'ny mpianatra momba ny. Izaho ho azo antoka ny mampiasa ity lahatsoratra ity, ary hanitatra ny ireo hevitra ireo. Ary koa misaotra, noho izay rehetra ataonareo ka hanao. Mivavaka aho mba Andriamanitra dia hanohy hitahy anao sy ny fianakavianao.
Wesley • Novambra 12, 2013 amin'ny 2:04 PM • navalin'i
Awesome. Aho dia reraka ny olona [Kristianina eo amin'ny lohalaharana, miaraka amin'ny maro hafa koa] mitoraka ity andininy toy izany trumps rehetra. Izany dia midika hoe ampiasaina ho toy ny Mialà ________ karatra maimaim-poana. Tsy izany mihitsy ny zavatra ny mpanoratra dia nanao hoe:. Misaotra articulating.
Hay • Novambra 12, 2013 amin'ny 2:13 PM • navalin'i
Awesome fampianarana eto. Foana aho voatahy noho ny Lahatsoratra. Misaotra an'Andriamanitra aho noho ny mampiasa anao ny fomba fiasany. Ianareo dia nantsoina mba tsy ho mozika, fa ny polipitra.
Andriamanitra anie hitahy U sy ny fianakavianao!
Sharon C. James • Novambra 12, 2013 amin'ny 2:14 PM • navalin'i
Misaotra betsaka noho ny fizarana hevitra ity. Izaho no mizara ny lahatsoratra ary mivavaha fa ny maro no efa nanao izany ny faneva, hahatakatra fa mitovy tanteraka amin'izay nisy Kristy kosa nisaina izany, ary koa ny Galatianina 6:1. Stay voatahy.
Christoph • Novambra 12, 2013 amin'ny 2:17 PM • navalin'i
Tiako ny nanonona indray Jesosy ao amin'ny Jaona 7:24 – “mitsara marina amin'ny fitsarana.” Izany disarms ny fanoherana, ary mitarika ho toy ny fahafahana hanazava izay midika, tahaka ny nataonao ao amin'ny hafatra.
Gloglo • Novambra 12, 2013 amin'ny 2:18 PM • navalin'i
Izao no vao niteny aho momba miaraka amin'ny dadako dia hoy izy: toy izany koa ny tena. Andriamanitra anie hitahy anao Manantena aho fa mamaky izany ny rehetra no
MJ • Novambra 12, 2013 amin'ny 2:19 PM • navalin'i
teny soa. Efa reko fa tsy tokony hanameloka, fa afaka mitsara amim-pahamarinana. Toy ny tamin'ny zavatra azoko lazaina momba ny namana izay “shacking ny” fa amin'ny fanaovana izany, Aho satria tsy mihatsaravelatsihy, satria aho tsy manao izany.
Mark King • Novambra 12, 2013 amin'ny 2:26 PM • navalin'i
Misaotra mamelabelatra izany Trip. Izany no foto-kevitra tena manan-danja firapotsy ity taranaka ity. Dia jo be misy. Tiavo ny esoeso no nanamarika, koa.
Hitako ny fomba fijery ny fitsarana ho toy ny tsirairay ny olana. Ny fomba aman-toetra mifaninana namitaka antsika hieritreritra hoe olona iray milaza amintsika ratsy isika ao amin'ny vovoka ny sasany raha toa lalana dia mba andrana ny fisandratana. Raha mahita izany ho toy ny fihetsika fitiavana, mitaky amin'ny hafa tanteraka mavitrika.
Zavatra iray hafa aho, dia nahazo… Ianao manao hoe ity iray ity ampahany manokana amin'ny fomba izay mety hampifangaro ny olona. Hoy ianao, ” I Jesosy no Tsy “midika” hoe tsy mety ny fitsarana rehetra. Ary raha ianao marin-toetra amin'ny tenantsika, dia tsy “midika” fa na.
Fotsiny noho ny mazava noho, angamba fomba tsara kokoa andian-teny izany dia ny hoe “Tsy tokony mandika izany i Jesosy hoe:” fitsarana rehetra dia tsy mety.
Ny hamaky haingana amin'ny alalan'ny, ary ny olona dia mety handeha amin'ny famakiana izany mieritreritra, “Oh, Jesosy dia tsy midika ny milaza fa?” Rehefa tena aho antoka natao hoe i Jesosy mihitsy no Hoy izy hoe. Izany LL in heviny.
Fantatro izay holazaina. Fotsiny mihazona anareo ho any amin'ny ambony indrindra raha haisoratra fitsipika. I matoky ianao hoe nahoana no nilazako fa.
Ankasitraho ny asa (rehetra raha, Tsy ny mozika)! Ataovy-mitoto vary rahalahy!
manome • Novambra 12, 2013 amin'ny 2:35 PM • navalin'i
Lalina ny fahamarinana rehefa niteny tamin'ny ity iray ity.
Andriamanitra anie hitahy ny asa fanompoana.
Matetika aho no mieritreritra fa rehefa mahatakatra tanteraka ny toetry ny maha-mpanota, isika dia miresaka ny namantsika amin'ny fangorahana sy fitiavana.
anajcruz • Novambra 12, 2013 amin'ny 2:42 PM • navalin'i
Tiako ity!! tena insightly, mampahery, aaaand mandresy lahatra!!!
mahatahotra fampahatsiahivana ny dikan'ny hoe hifankatia!! Misaotra rahalahy! TAHIN'ANDRIAMANITRA!!
miresaka momba: Andriamanitra ihany no afaka mitsara ahy? (By Trip Lee ny BuilttoBrag.com bilaogy) | Ron "Big Black" Garrett
WayneChristian • Novambra 12, 2013 amin'ny 3:59 PM • navalin'i
Hoy i Jesosy ihany izany tsara kokoa! Trip ianao-poana ny rivotra madio! Misaotra anao noho ny fahazotoana! Tsara nosoratana toy ny mahazatra! Andriamanitra Speed ​​rahalahiko!
JosiahCarter • Novambra 12, 2013 amin'ny 7:31 PM • navalin'i
Eny! Misaotra betsaka noho ny fanoratana izany! Izany no an-tsaiko dia be tato ho ato, indrindra rehefa mahita fa teny “mpitsara”. Tena aho fizarana ity!
David • Novambra 12, 2013 amin'ny 8:02 PM • navalin'i
Misaotra anao. Ny iray amin'ireo famaritana marina indrindra ny andininy izany sy ny dikan'izany fa efa hitako. Kristianina tsirairay no tokony handinika ny tenany amin'ny alalan'ny maso Andriamanitra, rehefa miresaka amin'ny hafa.
carlosAviles • Novambra 12, 2013 amin'ny 8:50 PM • navalin'i
tena nampahery. Ary hiezaka sy tsy. Misambotra ny tenako aho indraindray ary fantatro aho, dia tokony hijery ao anatin'ny voalohany alohan'ny miteny ary hanampy olona iray miverina amin'ny lalana Masina.
modallas • Novambra 13, 2013 amin'ny 1:53 aho • navalin'i
dia efa miady amin'ny hay tanisana. Ankehitriny dia nahazo fahatakarana tsara kokoa!!!
modallas • Novambra 13, 2013 amin'ny 1:54 aho • navalin'i
Izaho efa Bin sahirana izany. Misaotra an'Andriamanitra aho nahazo fahatakarana tsara kokoa
CITES • Novambra 13, 2013 amin'ny 6:44 aho • navalin'i
Izany ny antony manosika ao ambadiky ny zavatra milaza fa mahatonga ny fitsarana ny rahalahy manampy na mampidi-doza. Mieritreritra aho, “Izay tena manao ny tsy mety! Hoy ny Baiboly izany. Mila manamboatra azy…” Sa izany, “Izany no antony iany fanaintainana ary fantatro ny zavatra toy izany. Tena miahy anao aho sy tsy te fa ho anao…”
Like hoy Trip, amin'ny toeran-kafa isika dia nilaza mazava hitsara ny mpampianatra sandoka.
Mazava mila ny Fanahy Masina ny fahaiza-manavaka mba hanao fitsipika mahitsy, ka tokony ho mifandray Aminy eo anatrehan'ny, mandritra, ary rehefa!
Trip hevitra tsara iray hafa atao dia, izy ireo dia tsy hihaino antsika na dia ny am-po any an-toerana, raha tsy miaina isika authentically eo anatrehan'Andriamanitra sy ny rahalahy.
Junior • Novambra 13, 2013 amin'ny 7:40 aho • navalin'i
Ive no miady amin'ny izany nandritra ny fotoana kelikely izao. Fa mamaky ity lahatsoratra ity no nanao ahy hahatsapa 10 heny noho eo anatrehan'i. Thanks Trip! Andriamanitra anie hitahy ny rahalahy.
NDT • Novambra 13, 2013 amin'ny 8:10 aho • navalin'i
Excellent lahatsoratra! “By ny voany, no hahafantaranareo azy.” Mazava àry fa i Kristy whats antsika mba ho circumspect amin'ny famerenana ny hafa – tena zava-dehibe, rehefa mitory ny Filazantsara, ny ampahany voalohany dia manazava ny fomba olona iray dia misaraka amin'ny Andriamanitra masina noho ny fahotana (izany ny fitondran-tena fitsarana!) Avy eo dia manambara fa ny finoana an'i Jesoa Kristy (Ny asa fanavotana ataony amin'ny hazo fijaliana sy ny fasana foana) no valin 'olona fisarahana amin'Andriamanitra, ny Ray! Ny hafatry ny filazantsara dia tsy feno raha
hiala avy isika olombelona toerana VERY (Mpitsara antsika ny Lalàna!) Fa Kristy kosa, dia manolotra fahasoavana ho antsika mpanota. Araka ny nosoratan'i John Newton, “Aho indray mandeha efa very, Fa ankehitriny kosa aho HITA!”
Tatenda • Novambra 13, 2013 amin'ny 10:57 aho • navalin'i
Amen Bro. Mipetraka any Zimbabwe ary na dia andininy no malaza eto!!! Mitory ny filazantsara aho, ary efa nahita fotoana bebe kokoa noho izaho miraharaha ny mahatsiaro fa ny tsy mpino sy ny Kristianina izay tsy miaina tsara mampiasa ity andininy ity ho toy ny ampinga manohitra fanitsiana. Mampalahelo, tena mampalahelo…
Bruno • Novambra 13, 2013 amin'ny 11:48 aho • navalin'i
Darnell • Novambra 13, 2013 amin'ny 3:18 PM • navalin'i
I tanteraka manaiky fa fandikana ny fitsarana araka ny Matio 7. Izaho koa te-hanampy izany amin'ny filazana fa isika Kristianina tsy ho “mpitsara” izao tontolo izao, na ireo izay tsy ao amin'i Kristy, fa “mpitsara” ny tenan'i Kristy, na ny fiangonana. Andriamanitra milaza fa ny tenany “mpitsara” izao tontolo izao fa tsy antsika ny zanany. 1 Corinthians 5:12-13
miresaka momba: Article from Trip Lee amin'ny nitsara ny tenanao sy ny hafa « 360tanora
Stephen • Novambra 13, 2013 amin'ny 5:27 PM • navalin'i
Kate • Novambra 13, 2013 amin'ny 7:06 PM • navalin'i
Hey ~ mitory ity aho Alahady amin'ny fitsarana (na tsy LOL) ary nanontany tena aho raha afaka Mandika / Mametaka sasany ny eritreritrao ao amin 'ny toriteny? Misaotra! Kate
Clayton • Novambra 13, 2013 amin'ny 10:01 PM • navalin'i
Very lalina, Andriamanitra anie hitahy Bro
miresaka momba: Morning Mashup 11/14 | teolojia javatra
miresaka momba: HACM Weekly fantina [11/15/13] | Harvard Avenue College / Asa Fanompoana
resy • Novambra 18, 2013 amin'ny 1:38 PM • navalin'i
Ankasitrahako ny fitiavana an'Andriamanitra sy ny fitahiana tenim-pahendrena avy amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny ianareo ry zalahy… Fitiavana be
miresaka momba: INONA NO A kristianina hitovy? | Mitady Soul ao Seoul
Tyler • Novambra 26, 2013 amin'ny 1:07 PM • navalin'i
Misaotra be dia be noho ny famoahana izany. Mino aho fa io hafatra io dia tena ilaina ho an'ny Kristianina tany lafim-piainana rehetra mba hihaino. Mila manomboka ny fifankatiavana ny fomba Jesosy niantso antsika izany hoe niresaka faritra izay mila miresaka amin'ny fangoraham-po.
pelumi • Novambra 26, 2013 amin'ny 5:56 PM • navalin'i
Tena nanampy ahy izany
mitso-drano anao Trip
Kathryn • Novambra 27, 2013 amin'ny 8:51 PM • navalin'i
Azafady mivavaha fa Izaho no manana fo misokatra ho amin'ny fahamarinana; fa Izaho no mahalala izany sy ny ho afaka; Izay manam-pinoana an 'i Jesoa sy ny fibebahana ny fahotako. Fa Izaho no handray ny fahasoavany. Mba tsy ho tafintohina noho ny mila, fa ny ota. Misaotra anao.
Elvis • Desambra 4, 2013 amin'ny 11:09 aho • navalin'i
dia misy ihany ny hizara izany teny izany….fanokafana ny maso reaaly zavatra vao voalaza ao ireo bilaogy Trip…Tohizo ny asa fanompoana (izy rehetra)..
miresaka momba: Trip Lee – Andriamanitra ihany no afaka mitsara ahy? » Christian Apologetics & Intelligence Fanompoana
miresaka momba: Trip Lee - Andriamanitra ihany no afaka mitsara ahy? | Mpanompon'Andriamanitra Grace ApologeticsServants an'i Grace Apologetics
Michael • Janoary 29, 2014 amin'ny 12:47 PM • navalin'i
Raha tena mieritreritra momba izany, “Aza mitsara ahy.”, raha ny marina mitsaratsara.
Raha misy olona miezaka ny hanampy anao, ary miampanga azy ireo ny hitsara anareo……ara-teknika, ianao no hitsara azy ireo. (Ary diso miampanga azy ireo tamin'izany)
amim-pahatsorana, Afaka mitsara ahy ianareo raha tianareo, Mba mila fanitsiana. (“Marina amin'ny fitiavana”) Fotsiny tsy mitsara ahy noho ny taloha na na inona na inona afa-tsy ny Teny.
famindram-po • Febroary 19, 2014 amin'ny 10:29 aho • navalin'i
Wow. Izany no hafatra lehibe. tato ho ato, Niezaka aho mba hampahatsiahy ny tenako Matio 7 fa tsara fanahy ny hadinony: Inona izany?. Ary isika no mila manampy ny tsirairay avy, fa tsy ho mafy momba izany. I miombon-kevitra tanteraka. Tena mampalahelo mahita kinda vahoakan'i vahoakan'i hafa manakiana mafy ka nahita ny nanakiana mihevitra tapaka. Ny fitsikerana dia mazava ho azy fa tsy lavorary izy ireo fa toa tsy tsapako akory izany. Tena mahatezitra. More ny olona tokony hiaina amin'ny Matthew 7. Ary ny andininy farany dia be ny. Ny olona ny tsy ho te-handeha amin'ny lalana izay nanara-morona ny olona rehetra eo dia nandrora azy.
Simon • March 12, 2014 amin'ny 1:07 PM • navalin'i
Wow, teny manentana ny fanahy. Dia hamaky bebe kokoa avy amin'ny Lahatsoratra! ;)
Aprily • March 23, 2014 amin'ny 11:14 aho • navalin'i
Wow!!! Faly FARANY olona no niteny izany!!! Fotsiny aho miresaka amin'ny olona ao amin'ny birao momba izany ny roa andro lasa izay!!!! mahagaga bilaogy!!
Kyle • Mey 8, 2015 amin'ny 9:10 aho • navalin'i
toy izany eto dia fanontaniana iray ho anareo. fa ny vitsy lasa taona izao no nitoerako miasa amin'ny tsy misy na inona na inona jugding. -mahadomelina toy ny tsara tarehy be ny olon-drehetra eto amin'izao tontolo izao jugdes anao ary izany dia midika fa ireo olona ireo sao mahalala ny zava-drehetra izao momba anao. dia inona ny fomba fisainany, na ny zavatra atao ny iany na fomba na dia hanao zavatra izy ireo mba hilaza aminao ny fihetseham-ponao momba ny zavatra. Tena dont mahazo ahoana no ahafahan'ny olona manao izany. ny tena ratsy. no nahatongavako mba hahitana maro be ireo olona avy any mankahala ahy, ary mbola tsy nihaona mihitsy aza aho. theres tsy fomba ny hifehy ny zavatra tampoka ho eo an-doha. ara-tsaina mialoha jugdment dia azo ampiasaina mba hanomana ny tenanao manokana ho an'ny zavatra araka ny eritreritrao dia mety occure mahatonga ny zavatra tsikaritrao momba ny olona iray. fa raha mandoa tsara fotsiny saina sy afaka manangona amin'ny zavatra madinika izay mampiseho zava-misy momba ny olona iray dia mbola jugding? ary avy eo dia ny fanontaniana momba ny theres kevitra. avy lavitra ny ratsy indrindra fomba jugde olona. I dont mahazo azy. na dia vao nilaza io olona io fa dont matoky azy ireo hanao asa sasany noho ny (matetika tsy misy antony) HAFA DIA thats fa tena tsapako ary no Fantatro fa hanao. Mazava ho azy fa raha ity olona ity dia efa fantatra ny tsy, tantara dia afaka ary mamerina, fa ny olona iray milaza ny fihetseham-pony, mieritreritra, na ny fomba teo handeha hanao zavatra dia hagaigena izao. ny ankapobeny jamba jugdment. ary na ny olona ho izao sy ny fanaony encompetant hahatsapa mihitsy aza manandrana, na ny olona toa ahy, dia guentee mba hanaporofoana fa olona tena ratsy fa tsy hoe izay intsony. fa na dia ny tenanao aza ianao fotoana sy hizaha toetra ny fotoana indray. tombantombana ihany. eritreritra? afaka mandeha amin'ny andro rehetra,.
miresaka momba: Trip Lee - Andriamanitra ihany no afaka mitsara ahy? - Søg- Mpanompon'Andriamanitra Grace
miresaka momba: Andriamanitra ihany no afaka mitsara ahy… | Mitsiky By finoana